အနာဂတ်ကို .... ပိုင်ဆိုင်ဖို့ ...... ငါတို့ကိုယ်တိုင်...... ကြိုးစားစို့.....
မှတ်သားကြရမယ့် .... အမေ့ အမှာစကား...
Posted by အော်ရီဂွန် မြန်မာလူငယ် at 10:41 PM No comments:
Conversations with Aung San Suu Kyi...... By Alan Clements
Posted by အော်ရီဂွန် မြန်မာလူငယ် at 9:01 PM No comments:
ကုသိုလ် အကုသိုလ်....... အရှင်ဝိစိတ္တ(မနာပ ဒါယီ)
တရားပွဲတစ်ခုမှာ ကုသိုလ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အထူးပြု ဟောပြောဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ တရားခေါင်းစဉ်လေး အမည်ပေးပြီး အဲဒီကောင်းစဉ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မပြောခင် တရားနာ ပရိတ်သတ်တွေကို “ကုသိုလ်ဆိုတာ ဘာလဲ…”လို့ အရင်ဆုံး မေးစမ်းကြည့်လိုက်တော့ ထုံးစံအတိုင်း မြန်မာတရားနာ ပရိတ်သတ်ရဲ့ အဖြေက ဟိုလိုလို ဒီလိုလို ၀ါတားတားရယ်ပါ။ တစ်ချို့က “ကုသိုလ်ဆိုတာ ကောင်းမှုကိုပြောတာပါဘုရား..” လို့ ဖြေကြသလို တစ်ချို့က “ကုသိုလ်ဆိုတာ ကောင်းတဲ့အလုပ်ကို ပြောတာပါဘုရား..”လို့ ပြောတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ “ကုသိုလ်ဆိုတာ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာကို ပြောတာပါဘုရား..” လို့ ဖြေတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အဖြေတွေဟာ မှားတယ်လို့ မပြောနိုင်ပေမယ့် သေသေချာချာ သိလို့ဖြေတာရယ်လို့ မရှိကြပါဘူး။ စိတ်အထင်နဲ့ မှန်းပြီးဖြေလိုက်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာ အဲဒီလို အထင်နဲ့ဖြေနိုင်တာကိုက တော်လှပြီလို့ ပြောရမလို ဖြစ်နေပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘုန်းဘုန်းကတော့ သိသင့်သိထိုက်တဲ့ ကုသိုလ်နဲ့ အကုသိုလ်အကြောင်း အခြေခံကျကျ ရှင်းပြပေးဖြစ်ပါတယ်။
Posted by အော်ရီဂွန် မြန်မာလူငယ် at 6:02 PM No comments:
I think it much butter that…
Every man paddle his own canoe
လူတိုင်းလူတိုင်းဟာသူ့ရဲ့လှေကိုသူလှော်၇င် ပိုပြီးအဆင်ပြေလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။
သင်္ဘောသား စာရေးဆရာဖြစ်သူ မာရက်ကပြောတာပါ။ မည်သူမဆို မိမိအလုပ်ကို မိမိလုပ်မှ ပြီးမြောက်မှာ ဖြစ်တယ်။
အီဆွပ်ပုံပြင်(ဂရိပုံပြင်) ထဲကပုံပြင်တပုဒ်ကို ပြောပြမယ်။
တခါက ဘီလုံးငှက်မတစ်ကောင်ဟာ သူ့ရဲ့သားသမီးတွေနဲ့ ပြောင်းခင်းထဲမှာ အသိုက်ဖွဲ့နေတယ်တဲ့။
သူမရဲ့သားသမီးတွေဟာ အရွယ်မရောက် မပြန်နိုင်သေးခင်မှာ ပြောင်းခင်းဟာ ရင့်မှည့်လာပြီး ရိတ်သိမ်းချိန် ရောက်လာသတဲ့ ။
ဒါနဲ့ ဘီလုံးငှက်မဟာ အစာရှာမထွက်မီ သားသမီးတွေကိုအောက်ပါအတိုင်းပြောတယ်။
“ဒီပြောင်းခင်းကနေ တို့တတွေ ပြောင်းကြရမယ် . . . ဘယ်တော့ ပြောင်းရမယ်ဆိုတာကိုတော့ မသိသေးဘူး။ ဒီအနားကို လာပြီးပြောဆိုကြတဲ့ လယ်သမားတွေစကား မှတ်သားထားကြပါ”
ညနေ သူ့အမေဘီလုံးငှက်မကြီး ပြန်ရောက်တော့ ငှက်ကလေးတွေကပြောပြတယ်။
“အမေ. . . လယ်သမားကြီးက သူ့ရဲ့သားကိုခိုင်းတယ်။ ပြောင်းတွေရင့်မှည့်လို့ ရိတ်သိမ်းချိန်တန်ပြီ. . .
မိတ်ဆွေတွေကို မနက်ဖြန်လာကူရိတ်ဖို့ အကူအညီ သွားတောင်းတဲ့’’
“အမေရယ်…သားတို့။သမီးတို့ကို ပြောင်းပေးပါ’’လို့ငှက်ကလေးတွေက တောင်းပန်တော့ အမေက…
“အင်း…ကိစ္စမရှိသေးဘူး သားတို့၊ သမီးတို့ရယ်…’’လယ်သမားတွေဟာ မိတ်ဆွေ အိမ်နီးနားချင်းတွေကို အားကိုးရင် ဘာမှအလုပ်ဖြစ်မှာ မဟုတ်သေးဘူးလို့ ဖျောင်းဖျလိုက်လေသတဲ့။
ဒါနဲ့ သူတို့တတွေဟာ အေးဆေးစွာ အိပ်ကြတယ်။
နောက်တနေ့မှာလဲ ဘီလုံးငှက်မဟာ သားသမီးတွေကို ထုံးစံအတိုင်း လယ်သမားသားအဖ၇ဲ့ စကား မှတ်သားထားကြဖို့မှာပြီး အစာရှာထွက်သွားသတဲ့။
ညနေကျတဲ့အခါ သူ့အမေ ဘီလုံးငှက်မကြီး ပြန်ရောက်တော့ ငှက်ကလေးတွေကပြောပြတယ်။
“အမေရေ . . . လယ်သမားကြီးနဲ့သူ့ရဲ့သားဟာ စောင့်နေပေမယ့် ဘယ်သူမှ မလာဘူး’’
“ဒါနဲ့လယ်သမားကြီးကသူ့၇ဲ့သားကိုခိုင်းပြန်တယ်။ ဆွေမျိုးတွေကို မနက်ဖြန်လာကူရိသတ်သိမ်းပေးဖို့ အကူအညီသွားတောင်းလို့မှာတယ်။”
“ဟုတ်တယ် အမေရယ်..သားတို့သမီးတို့ကိုပြောင်းပေးပါလို့ ”တောင်းပန်ကြပြန်တယ်။
“ကိစ္စမ၇ှိသေးပါဘူး သားတို့သမီးတို့…လယ်သမားဟာဆွေမျိုးတွေကို အားကိုးတာပဲ.. .ဒါဆိုရင် ဘာမှအလုပ်ဖြစ်မှာ မဟုတ်သေးဘူး”လို့ နှစ်သိမ့်ပြန်သတဲ့။
ဒါနဲ့ သူတို့တတွေဟာ အသိုက်မှာ အေးဆေးစွာ အိပ်ကြတယ်။
နောက်တနေ့မှာ ဘီလုံးငှက်မဟာ အစာရှာမသွားမီ သားသမီးတွေကို ထုံးစံအတိုင်း လယ်သမား သားအဖရဲ့ စကားကို သေသေချာချာ မှတ်သားထားဖို့ မှာတယ်။
ညနေဖက် သူ့အမေ ဘီလုံးငှက်မကြီးပြန်ရောက်တော့ ငှက်ကလေးတွေက ပြောပြတယ်။
“အမေရေ. . . လယ်သမားကြီးနဲ့ သူ့ရဲ့သားဟာ စောင့်နေပေမယ့် ဘယ်သူမှ မလာဘူး”
“အေး. . .သူတို့ဟာ ဆွေမျိုးအာားကိုးတာကိုး”
“ဟုတ်တယ်အမေ...ဘယ်သူမှ မလာတော့ လယ်သမားကြီးကသူ့ရဲ့သားကိုပြောတယ်...မနက်ဖြန် တို့နှစ်ရောက်ပဲ ပြောင်းခင်းကိုရိတ်ကြမယ်”တဲ့…
“ဟုတ်လား...ဒါဆို သားတို့သမီးတို့ ပြောင်းဖို့အချိန်ရောက်လာပြီ”လို့ပြောကာ အသိုက်ပြောင်းသွား လေသတဲ့။
ဘာမဆို ကိုယ်တိုင်လုပ်မှ အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကို ရှေးကအယူအဆပါပဲလှို့ ထင်ချင်ထင်ကြမယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအယူအဆတွေဟာနေရာအတော်များများမှာ ခုထက်ထိတိုင် မှန်နေဆဲပါပဲ။
လူတွေဟာ မိမိကိုယ်ကိုမိမိ အားမကိုးရင် အလုပ်ပြီးစီးလေ့မရှိဘူး။ဒါ့ကြောင့် ကုမ္ပဏီအများစုဟာ မိသားစုကုမ္ပဏီတွေ ဖြစ်ကြတာကို တွေ့ရပေမယ်။ ဒါတောင် ဆွေမျိုးအားကိုးလို့ မရဘူး ဆိုတာ လူတိုင်း သိကြတာပဲ။
တကယ်တော့ လူတွေဟာ တစ်ဦးကောင်း တစ်ယောက်ကောင်းနဲ့ လုပ်လို့မရတာတွေရှိတယ်။ စုပေါင်းလုပ်ကြကိုင်ကြလို့ အကျိုးဖြစ်ထွန်းကြပါတယ်။ သို့သော် ဒီလိုစုပေါင်းလုပ်ပြီး စုပေါင်း အကျိုးခံစားရတဲ့ ပုံစံကို သိပေမယ့် လိုက်နာဖို့ အတော်ခက်ခဲကြတယ်။
ကျွန်တော်ဂျပန်ရောက်စဉ်က ပြောဆိုတဲ့စကားတစ်ခုကို နားထဲကမထွက်ဘူး။ “ဂျပန်သုံးယောက် ပူးပေါင်းမိရင် ကုမ္ပဏီထောင်တယ်.. .မြန်မာ သုံးယောက်ပူးပေါင်းမိရင် ရန်ဖြစ်တယ်”တဲ့။
သူ့စကားကြားကာစတော့ စိတ်ဆိုးသလိုလိုပါပဲ။ ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်း လေ့လာတဲ့အခါ မှန်နေတာကို တွေ့ရတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဟာ သူ့ကျွန်ဘဝ အကြာကြီး ရောက်ခဲ့တယ်။ စိတ်ဓာတ် ရင့်ကျက်တဲ့ အလေ့အကျင့်တွေ မရကြဘူး။ စိတ်ဝမ်းတွေကွဲနေတယ်။ ဒီအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ စိတ်ဓာတ်ကိုပျိုးထောင်ရမယ်။
ခေတ်မီတိုးတက်တဲ့ ကမ္ဘာကြီးမှာ တစ်ယောက်ထဲ ရပ်တည်လို့မရပါဘူး။တကယ်တမ်းတိုးတက်ချင်ရင် စုပေါင်းလုပ်ကိုင် တတ်ဖို့လိုတယ်။ဝေမျှဖို့ လိုတယ်။အုပ်ချုပ်တတ်ဖို့ လိုတယ်။
တိုးတက်ကြီးပွားဖို့ မိမိကိုယ်ကို အားကိုးသလို သူတပါး အကူအညီကိုလည်း ရအောင်ယူတတ်ရမယ်။ မိမိနိုင်ငံတိုးတက်ဖို့ကျွန်တော်တို့တတွေ လေ့ကျင့်ကြရဦးမယ်။
Posted by အော်ရီဂွန် မြန်မာလူငယ် at 10:48 PM No comments:
"တကိုယ်ရည်စာ အာဏာရှင် တော်လှန်ရေး"
အနည်းဆုံး ကိုယ့်စည်းကိုယ်လုံတဲ့ နိုင်ငံသားကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်နေ မယ်ဆိုရင် တောင် အာဏာရှင်စနစ်ကို အလိုလိုဆန့်ကျင်ပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်စည်းကိုယ်လုံဖို့ဆိုတာ ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ်ရပ်ပြီး ကိုယ့်အသိစိတ်ဓါတ်နဲ့ကိုယ် အာဏာရှင်တွေရဲ့ အမြီးကျက်အမြီးစား၊ ခေါင်းကျက်ခေါင်းစားတဲ့ စနစ်ကိုလက်မခံဖို့၊ တဦးချင်းတမိသားစုချင်း အဂတိကင်းတဲ့ စားဝတ်နေရေးကို ဖန်တီးဖို့ ကိုယ့်ပါတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း အဂတိကင်းတဲ့ စီးပွားရေး လူမှုဆက်ဆံရေးစနစ်ကို ထူထောင်ပေးဖို့ပါ။
ဘယ်လောက်ပဲ ဆင်းရဲပါစေ၊ ပြည်သူတိုင်း အဂတိ ကို ငြင်းဆန်ပြီး ပြတ်ပြတ်သားသားနေမယ်ဆိုရင် အာဏာရှင်တွေအတွက် နေစရာနေရာရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ အာဏာရှင်စနစ်ဆိုတာ အဂတိ နဲ့ တည်ဆောက်ထားတာ။
ခုတော့ ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင် အဂတိမှုကိုမရှောင်ရှားနိုင်ကြဘူးဖြစ်နေတယ်။
ဆန်ရောင်းတဲ့သူက ဆန်ခိုး၊ ဆီရောင်းတဲ့သူကဆီခိုး၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံက သိန်းထောင်ချီ ရင်းနှီးနေတဲ့ ကုန်သည်ကြီးတွေလည်းခိုး၊ ၀န်ထမ်းတွေလည်းခိုး၊ ဆရာဝန်လည်း ဆရာဝန်အရောက်၊ အင်ဂျင်နီယာလည်းအင်ဂျင်နီယာအရောက်၊ ကျောင်းဆရာလည်းကျောင်းဆရာအရောက် အားလုံး အဂတိ မှုတွေကို မငြင်းဆန်နိုင်ဘူးဖြစ်နေကြတယ်။ အာဏာရှင်တွေဟာ အဲဒီ အဂတိတွေနဲ့ အသက်ဆက်နေတာပါ။
အဂတိမှုကို ပြည်သူတိုင်းက ငြင်းဆန်ကြမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်စည်းကိုယ်လုံကြမယ် အာဏာရှင်တွေသွေးဆောင်ဖြားယောင်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို ငြင်းဆန်ပြီး ကိုယ်ကျင့်တရားတွေကိုညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ စောင့်ထိန်းကြမယ်ဆိုရင် အာဏာရှင်တွေနေစရာ တနေရာစာတောင် မရှိစေရဘူး။
Posted by အော်ရီဂွန် မြန်မာလူငယ် at 10:47 PM No comments:
Posted by အော်ရီဂွန် မြန်မာလူငယ် at 3:18 PM No comments:
Posted by အော်ရီဂွန် မြန်မာလူငယ် at 9:14 PM No comments: